Ikhempu kaRamaphosa yehlukene phakathi ngodaba lukaNobhala Jikelele | News24
LAST UPDATED: 2018-11-21, 22:41
Ikhempu kaRamaphosa yehlukene phakathi ngodaba lukaNobhala Jikelele
Johannesburg - Ikhempu kalowo osanda kukhethwa njengoMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kubikwa ukuthi yehlukene phakathi ngempikiswano ekhona ngokwehlulwa kukaSenzo Mchunu.
Umholi oqhamuka esifundazweni ebeseseka uMchunu usichithile isikhalazo esifakiwe mayelana namavoti angu-63 "angekho", wabe esecela bonke abasekhempini kaRamaphosa ukuba bakwamukele ukuthi u-Ace Magashule nguye uNobhala Jikelele omusha.
"Kumele siqhubekele phambili manje samukele nje ukuthi sikhale ngaphansi. Akumele silwisane nemiphumela ngoba lokho kungase kudale izinxushunxushu ngaphakathi enhlanganweni," esho.
Lo mholi ongafunanga negama lakhe uthe lokhu kungase kubhidlize ingqungquthela.
I-steering committee yale ngqungquthela ibe nomhlangano ngoLwesibili ekuseni ukudingida ukuthi lolu daba lwamavoti anyamalele luzokwenziwanjani.
INews24 ibone i-video yekhokhasi kaRamaphosa isemhlanganweni ngoLwesibili ekuseni, itshengisa umholi okubukeka sengathi uSekela Sihlalo we-ANC eGauteng uDavid Makhura etshela izithunywa ukuba zilulwele lolu daba uma seluphakanyiswa engqungqutheleni.
Uma lolu daba lungaxazululwanga ngesikhathi lungase lubambezele ukuvotelwa kwamalungu angu-80 eNational executive committee (NEC) ye-ANC, okulindeleke ukuba kwenzeke ngoLwesibili.